2019-08-02 | Job Vacancy in Myanmar
2019-08-02 06:10:01 , [Unicode]Please admin LCCI le…
LCCI level1+2 (For December series UK)နှင့်​ Job Trainning
စာသင်ဝိုင်းဖြစ်လို့ ​​​​ကျောင်းသားတစ်​​ယောက်​ချင်းကို ​သေချာလိုက်​ကြည့်​​ပေးတယ်​ အမှား​တွေကို ထိထိမိမိ​ထောက်​ပြ​ပေးနိုင်​ပါတယ်​
UK exam ​အောင်​မြင်​ဖို့အာမခံပါတယ်​ရှင်​🎓🎓🎓
For December series 2019
Saturday only( section C)
3.8.2019 (Saturday only)
Time: 9:00 to 12:00am⏰⏰
Sunday only (section D)
Time: 11:00 to 1:00⏰
ဒါအပြင်​ UK exam ကာလ ပြီးရင်​ အလုပ်​ဝင်​တဲ့အခါ အဆင်​​ပြေ​စေဖို့အတွက်​ Trainning ပါ​ပေးပါ
computer basic, 💻
လုပ်​ငန်းခွင်​တွင်​ အသုံးပြု​နေ​သော စာရွက်​စာတမ်းများ📝📄
-cash book ​ရေးသွင်းပုံ
-payment list စာရင်းသွင်းပုံ
-stock (Inventory) ကုန်​ပစ္စည်း အဝင်​ အထွက်​စာရင်း
-TAX Knowledge အခွန်​ပညာဆိုင်​ရာများ
-Export and Import ဆိုင်​ရာ Knowledge များ
-customer service Trainning,🙋
-Telephone ​ပြောခြင်းဆိုင်​ရာ service Trainning☎☎
-အပြင်​ english စာ ​လေ့လာ​ပုံ​
-Email ပို့ခြင်း email အ​ကောင့်​ဖွင့်​​ပေးခြင်းများ အပါအဝင်​ google မှ စာ​လေ့ပုံ​တွေပါ လမ်းညွှန်​​သင်​ပြ​ပေးပါတယ်​
၈​သောင်း ၅ထောင် ကျပ်​ for level 1+2 and Trainning)
​ကျောင်းမှာ test 3ကြိမ်​ ​ဖြေဆိုရပါတယ်​ 3ကြိမ်​မှာ အမှတ်​အများဆုံးရရှိသူများ ​ကျောင်းတက်​မှန်​သူများကို အမှတ်​တရ ဒိုင်းဆုများနှင့်​ ချီးမြှင့်​​ပေးမှာလဲ ဖြစ်​ပါတယ်​ 🏆🏆
LCCI level1+2 (For December series UK)နွင့်​ Job Trainning
စာသင်ဝိုင်ျးဖစ္လို့ ​​​​ကေ်ာင်းသားတစ်​​ယောက်​ခ်င်းကို ​သေခ်ာလိုက်​ကြည့်​​ပေးတယ်​ အမွား​တြေကို ထိထိမိမိ​ထောက်ျပ​ပေးနိုင်​ပါတယ်​
UK exam ​အောင်ျမင်​ဖို့အာမခံပါတယ်​ရွင်​🎓🎓🎓
အဲ့လို​အတြက်ေ​က်ာင်းစည်းကမ်း​တြေကို​တော့ ​အောက်​မွာဖတ်​​ပေးပါရွင်​ 👇👇👇
ဒါအျပင်​ UK exam ကာလ ပြီးရင်​ အလုပ်​ဝင်​တဲ့အခါ အဆင်ျေပ​စေဖို့အတြက်​ Trainning ပါ​ပေးပါ
လုပ်​ငန်းခြင်​တြင်​ အသုံျးပု​နေ​သော စာရြက်​စာတမ်းမ်ား📝📄
-cash book ​ရေးသြင်းပုံ
-payment list စာရင်းသြင်းပုံ
-stock (Inventory) ကုန်​ပစ္စည်း အဝင်​ အထြက်​စာရင်း
စတဲ့ လုပ်​ငန်း ခြင်​ လက်​​တြေပါ Trainningမ်ား
-TAX Knowledge အခြန်​ပညာဆိုင်​ရာမ်ား
-Export and Import ဆိုင်​ရာ Knowledge မ်ား
အလုပ်​ငန်းခြင်​​ရောက်​တဲ့အခါ ကိုယ့်​လုပ်​ငန်းနဲ့ ဆိုင်​တဲ့ customer ​တြေနဲ့ စကားျေပာဆက်​ဆံအခါ ဘယ်​လိုျေပာရမယ်​ ဘယ်​လိုစကားလုံး သုံးနှုန်းရမယ်​ဆိုတာ​တြေ လမ်းညွှန်​​ပေးတဲ့ trainning ပါ
-Telephoneျေပျာခင်းဆိုင်​ရာ service Trainning☎☎
ဖုန်းျေပာတဲ့အခါ တစ်​ဖက်​လူကို မျမင်​ရတာ​ကြောင့်​ မိမိစကားျေပာဆို ​က အသံ​အ​နေအထားအ​ပေါ်တစ်​ဖက်​လူက ​ကောက်​ခ်က်​ခ်​ပေးတာ​ကြောင့်​ Telephoneျေပာတဲ့အခါျေပာရမယ့်​ အသုံးအနှုန်း​တြေကို လမ်းညွှန်းျေပျာပ​ပေးတဲ့ Trainning ပါ
-အျပင်​ english စာ ​လေ့လာ​ပုံ​
-Email ပိျု့ခင်း email အ​ကောင့်​ဖြင့်​​ပေျးခင်းမ်ား အပါအဝင်​ google မွ စာ​လေ့ပုံ​တြေပါ လမ်းညွှန်​​သင်ျပ​ပေးပါတယ်​
#သင်​တန်းပြီးသြားရင်​ အလုပ်​ရွာ​နေသူမ်ားအတြက်​ အလုပ်​ပါ ရွာ​ပေးပါသည်​
၈​သောင်း ၅ထောင် က်ပ်​ for level 1+2 and Trainning)
Present မ်ား​ပေးပါတယ်​ 🎁
2.​ပေးလိုက်​​သော အိမ်​စာ​တြေကို အိမ်​စာ စာအုပ်​သီးသန့်​ထားရျွိပီး အိမ်​စာလုပ်​လာခဲ့ရပါမယ်​
3. အိမ်​စာ စာအုပ်​​တြေကို အတန်းမစခင်​ ခုံ​ပေါ်မွာ ထပ်​​ပေးထားရပါမယ်​ ​အိမ်​စာမလုပ်​လာတာ အိမ်​စာ စာအုပ်​​မေ့က်န်​ခဲ့သူမ်ားကို fine ​ကောက်​ပါမယ်​ (3ကြိမ်​အထိ စာမလုပ်​လာပါက သင်​တန်း​ကေ်ာင်းမွ လက်​ခံ​တော့မည်​မဟုတ်​ပါ)
4. မလိုက်​နိုင်​တဲ့ စာ​တြေရွိရင်​ viber group ထဲမွာ စာ​မေးစာျေဖလုပ်​လို့ရပါတယ်​
5. ​ကေ်ာင်းမလျာဖစ်​ရင်​ ခြင့်​တိုင်​​ပေးပါ အတန်းပ်က်​သြားတဲ့စာ​တြေအတြက်​ အခ်ိန်​ပို​ခေါ်ရင်​လာနိုင်​ရပါမယ်​
6. EXAMျေဖခါနီးရင်​ အခ်ိန်​ပို​ခေါ်ပါ့မယ်​ ​(​ကေ်ာင်းသား​တြေနဲ့ အခ်ိန်​ညွိပြီး)
7. ​ကေ်ာင်းသင်​တန်း ခြင့်​မတိုင်​ပဲ ၂ကြိမ်​ ပ်က်​ရင်​ စာလုံးဝျပန်​မသင်​​ပေးပါ
8. UK EXAM ​ဖြေဖို့ ​ကေ်ာင်းမွ တာဝန်​ယူ​ဆောင်​ရြက်​​ပေးမျွာဖစ်​တဲ့အတြက်​​ကြောင့်​ စာတစ်​ခုတည်းသာ ​အာရုံစိူက်​​ပေးဖို့လဲျေပာခ်င်​တယ်​
#သင်​တန်းပြီးဆုံးပါက certificates မ်ား ​ပေးအပ်​ခ်ီျးမင့်​မျွာဖစ်​တဲ့အတြက်​
​ကေ်ာင်းမွာ test 3ကြိမ်ျေဖဆိုရပါတယ်​ 3ကြိမ်​မွာ အမွတ်​အမ်ားဆုံးရရွိသူမ်ား ​ကေ်ာင်းတက်​မွန်​သူမ်ားကို အမွတ်​တရ ဒိုင်းဆုမ်ားနွင့်​ ခ်ီျးမှင့်​​ပေးမွာလျဲဖစ်​ပါတယ်​ 🏆🏆
အမွတ်​ ၈၆၀.ထူပါရုံ ၁၄လမ်းအ​နောက်​ သာ​ကေတမြို့နယ်​
This entry was posted in Training and Class on 2019-08-02 by admin.
2019-08-02 06:09:49 , [Unicode]Please admin LCCI le…